Mahadsanid Madaxwayne Farmaajo: SHAN-SAFAR HAL DIYAARAD LAGUMA KIREYN LACAGTEENA! |
Mahadsanid Madaxwayne Farmaajo: SHAN-SAFAR HAL DIYAARAD LAGUMA KIREYN LACAGTEENA!
Ilaa hadda Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Fafmaajo wuxuu galay 5-safar Ma jirto hal diyaarad oo si private ah loogu kireeyay canshuurta laga qaaday dadka soomaliyeed.
1-#SUCUUDIGA…..Diyaaradda Madaxweynuhu raacay waxay ahayd mid si gaar ah boqortooyada sucuudigu ugu soo dirtay.
4-#IMAARATKA- Diyaaradda qaaday madaxweynaha waxaay ahayd mid si gaar ah oo maamuus leh dowlada imaaratku ugu soo dirtay.